Tontolo Arabo : “Jadona demaokratika iray i Iràna” · Global Voices teny Malagasy
Miezaka daholo ny rehetra hanova ny zavamisy, afa-tsy ireo Arabo
Voadika ny 18 Oktobra 2020 6:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Español, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jona 2009. Amin'ny fiteny anglisy daholo ny rohy raha tsy asiana fanamarihana manokana)
Mitohy miraradraraka avy anatin'ny tontolo arabo ireo fanehoankevitra mahakasika ireo zavaniseho tao Iràna, taorian'ny fifidianana izay ho filohan'io firenena io, ka nahazoan‘i Mahmoud Ahmedinejad fepotoana fanindroany indray, tamina isanjato 66% tamin'ny vatompifidianana.
Ao anatin'ity fantina fanehoankevitra ity, ampitahain'ireo arabo bilaogera ny tontolo pôlitika misy any amin'ny fireneny sy ny ao Iràna, no sady omen-dry zareo ihany koa ny fahitàny ny fivoaran'ny toedraharaha eny an-kianja.
Ao amin'ny Twitter, Essam Al Zamel [arabo], avy ao Arabia Saopdita, manao tsindrom-paingotra hoe:
pikantsary avy amin'i Al Zamel
Mitaky fanadihadiana momba ny vokatry ny fifidianana tao Iràna ny Vondrona Eorôpeàna. Resaka adala ! Any amin'ny firenena arabo misy fifidianana atao ary ahazoan'ny mpandresy isanjato hatramin'ny 99% fa isika tsy mbola nandre velively fanoherana avy amin'izy ireo !?
Ilay Jordaniàna Ali Dahmash manamarika koa hoe tsy misy dikany raha izay demaokrasia any amin'ny tontolo arabo raha miohatra amin'i Iràna :
Antsoiko hoe firenenea iray misy jadona demaokratika i Iràna. Miaina fanalalahana sy fahalalahana bebe kokoa io firenena io, izay tsy misy any amin'ny tontolo arabo. Afaka mifidy izay ho governemanta ao aminy ireo lehilahy sy vehivavy any Iràna, saingy ny Mpitarika Faratampony hatrany no mifehy ny zavatra rehetra. Afaka mandeha mifidy ny vehivavy, miasa na aiza na aiza, mamily fiara, mandeha mivezivezy, manao ski eny an-tendrombohitra, fa tsy azon'izy ireo atao ny mirotsaka hofidiana. Iràna no demaokrasia lehibe indrindra ao Afovoany-Atsinanana, ary faharoa manaraka an'i Libanona, saingy mbola iharan'ny famoretana, ny fanenjehana ary ny fandrahonana ho ampidirina am-ponja na hovonoina ireo vitsy an'isa toy ny Baha’is, ny pelaka ary ny Armeniàna.
Momba ny savorovoro nitranga farany mikasika ireo voka-pifidianana, manazava ilay bilaogera :
Raha nampangain'Ing. Moussavi ho nanao hosoka sy nanao fitaka tamin'ny fifidianana ry zareo manampahefana, satria nolazainy fa vatompifidianana niisa 14 tapitrisa no tsy nisaina, nidina an'arabe ireo mpomba azy tao Teheran naneho ny hadisoam-panantenany sy ny hatezeran-dry zareo. Tanora mitaky fanavaozana sy fiovàna no ankamaroan'ireo nanao hetsipanoherana. Hatramin'izay io vondron-taona avy amin'ny sarangam-piarahamonina antonony io no efa afo mandrehitra ny revôlisiôna sy ny fitroarana. Saingy izaho tsy mahita an'io ho toy ny fitroarana manohitra ny Fanjakàna Islamika, izay ifalifalian'ny maro, fa kosa toy ny dingam-panavaozana mizotra milamina mba hisian'ny fiovàna sy ny fampanarahana toetrandro, izay tokony hanohy ny làlany. Zotra anaty tsy azo ihodivirana io, izay tsy tokony ho ny hery avy any ivelany, na ny fandrahonana avy amin'ny sehatra iraisampirenena no hanery ny fametrahna azy. Ny fotoana no hanova an'i Iràna amin'ny farany.
Dahmash koa maneho hevitra momba ny anjara asan'ny Twitter, izay nahafahan'ireo feo iraniàna mpanohitra mba hanako manerana izao tontolo izao, na teo aza ny fanakendàna nataon'ny governemanta iraniàna ny fahalalahana maneho hevitra:
Mbola fehezin'ny governemanta hatrany ireo media sy ny fahafahana miditra amin'ireo tranonkala anaty aterineto toy ny YouTube & Facebook, izay voabahana ankehitriny. Norarany tsy ho afaka hanaraka ireo savorovoro ihany koa ireo media iraisampirenena. Araka izany dia nitodika tany amin'ny Twitter sy ireo tranonkala hafa ao amin'ny tambajotra sôsialy ireo mpanohitra mba hitatitra izay zavatra mitranga eny an'arabe ao Téhéran. Mitodika any amin'ireo iraniàna mpampiasa aterineto ihany koa ireo mpilaza vaovao mahazatra mba hahazo izay fitantaràna sy lahatsary momba ny toedraharaha. Nangatahan'ny fitantanan'i Obama ny Twitter mba hanemotra ny fanapahana ho fikojakojàna fanaony satria io sisa no hany fomba ahafahan'ny Iraniàna mifandray amin'izao tontolo izao ! Marobe ireo mpanao hetsipanoherana no manao sorona ny ain-dry zareo amin'ny fampiasàna ny findainy handraketana lahatsary sy hanapihana sary an'ireo fitanjozorana, izay herinandro lasa izao no nanombohany ary nivadika ho herisetra, efa nisy 7 sahady no namoy ny ainy.
Ny dingana farany ataontsika dia ao amin'ny Palestinian Pundit, izay namelivelesan'i Zarathustra an'ireo tanora arabo:
Ny zavatra mitranga ao Iràna amin'izao fotoana izao (na ankolafy iza no tohananao, na tena mpitaky fanavaozana tokoa na tsia ireo mpanohitra) dia tsy manao afa-tsy ny manamafy ny hoe hatraiza ry zareo Arabo (ary ny tanora indrindra indrindra) no vahoaka tsy misy hery sy tsy misy hazondamosina indrindra ao Afovoany-Atsinanana.
Oviana ry zareo no nankahàtra farany ny baikon'ireo manampahefana ary nidina an'arivony maro teny an'arabe ve ry zareo naneho ny tsy fahafaliany tamin'ny hetsika iray nataon'ny governemantan-dry zareo? Efa andiantaranaka marobe nifandimby, voafehin'ireo arabo mpitondra tsara mihitsy ny fahaizamanao entina mamoritra, ary voaforon-dry zareo ny andiantaranaka tanora arabo iray izay mahita ny hasambarany ao anaty fifotetahana, filalaovana karatra, fidorohana ary fanofinofisana ny ho any Dubai na any amin'ireo tany Tandrefana mba hiasa ary hahazo volabe. Andiantaranaka iray izay variana kokoa amin'ireo sariitatra danoà tsy misy dikany sy manàla baràka ary ny famoretana isanandro vaky. Misy hetsika mavitrika andraisan'ireo tanora anjara manerana ny tany, manomboka any Amerika Latina hatrany Iràna sy Tiorkia, ka anatin'ireny ireo tanora dia miezana ny maka andraikitra mavitrika mba handraisana fanapahankevitra momba ny hoaviny, saingy tsy hita ao anatin'ny tontolo arabo ny tahàka ireny.
Ny tsy firaharahiana sy ny fahalainan'ny tanora arabo dia vokatra mivantana avy amin'ny tsy fahombiazana faoben'ireo andiantaranaka niavian'ireo ray aman-dreniny. Mahavaky fo ny hoe any amin'ireo firenena andalampandrosoana, raha ny toa fahitàna azy, samy miezaka daholo ny rehetra hanova ny zavamisy [manodidina azy], afa-tsy ireo Arabo, kanefa ireny mpanao jadona ireny ihany, efa nifandimby ampolo taona maro nitondra tao amin'ny governemanta ny ray sy ny zanaka lahiny, fa toa tsy mampaninona an-dry zareo velively izany.